IDelivra Yengeza Ukwenza Okwe-E-Commerce Nokwehlukanisa | Martech Zone
UMnyango Wezohwebo wase-US kubika lokho kuthengiswa kwe-inthanethi kwaba ngaphezu kokukodwa kokuthathu kokukhula kokuthengisa okuthengiswayo ngo-2015. Ucwaningo luye lwabonisa nokuthi ukuthengiswa kwe-inthanethi kwaba namaphesenti angu-7.3 okuthengiswa okuphelele okuthengisiwe ngo-2015, kusuka kumaphesenti angu-6.4 ngo-2014.
Imikhankaso yokukhangisa nge-imeyili ibhekele lokhu ngaphezu kwamaphesenti ayisikhombisa kuko konke ukuthengiselana nge-e-commerce, okwenza kube ithuluzi lesibili lokukhangisa le-ecommerce elisebenza kahle kakhulu ngemuva komsebenzi wokusesha online, onenani lokuguqulwa kwamaphesenti ayi-15.8. Ngaphandle kokusebenza kwayo, akubona bonke abathengisi abenziwa online abalinganayo maqondana nezabelomali zokumaketha nabasebenzi.
KuNeil Berman, umsunguli, kanye ne-CEO yeDelivra, kusobala ukuthi umnotho we-e-commerce wanamuhla ushiya umnyango uvulekele umnyango wabahlinzeki abaningi be-software ukuthi basebenze ngempumelelo izidingo ezahlukahlukene zabathengisi esikhaleni.
Akuyona imfihlo abathengisi abaphezulu be-100 emhlabeni abangasebenzisa isoftware eyinkimbinkimbi kakhulu futhi enamandla yokuthengisa nge-imeyili ngoba banamaqembu amakhulu, azinikele e-commerce ukuze afunde inani elikhulu lezinto zokusebenza ezisebenzayo. Kukhona nabathengisi abaningi be-inthanethi basendaweni nabesifunda ngaphandle kweqembu lokumaketha elizinikele ezimweni eziningi. Kubalulekile ukuthi laba bathengisi basebenzise imali ngempumelelo ye-imeyili eletha ezentengiselwano, kepha badinga ipulatifomu enikezela okubalulekile kokusebenziseka kalula nokusetshenziswa ngokushesha.
Ukubuka konke kwezohwebo kweDelivra
IDelivra Commerce iphakethe lakamuva elivela kumhlinzeki wesoftware wokuthengisa futhi linikezelwe kwi-e-commerce marketing automation. Okugxile ekuhlanganisweni neMagento, Shopify, neWooCommerce, ipulatifomu ilungele abathengisi abancane nabaphakathi nendawo abaku-inthanethi noma ngaphandle kokusekela izindawo zezitini nodaka — futhi ivumela imikhankaso yokuthengisa ethunyelwe ngemuva kokuthengwa kwe-imeyili. Ama-imeyili okushiya inqola yokuthenga enziwe ngezifiso nawo angesinye sezici ezivelele kusukela lapho ucwaningo kukhombisa ukuthi amaphesenti angama-60 ama-imeyili ezinqola ezilahliwe akhiqiza imali, iningi lawo elenzeka emahoreni angama-24 okuqala e-imeyili athunyelwe.
Ukuhlanganiswa kwesoftware yangempela yesikhathi sokuthenga kusiza abathengisi abakwi-inthanethi ekukhuthazeni ukunikezwa kwemikhiqizo, ukwenza ngcono okuhlangenwe nakho kwamakhasimende, nokumaketha kabusha kubathengi kuwo wonke ama-imeyili enziwe uqobo, azenzakalelayo. IDelivra Commerce inika amandla abasebenzisi ukudala ngokuzenzakalela amasegimenti ngokususelwa kudatha yokuthenga evumelanisiwe kusuka Magento futhi WooCommerce izigaba, noma Thenga izinhlobo zemikhiqizo, ukuthengisa umkhiqizo futhi uphinde uhlanganyele nabathengi bangaphambilini. Ngokwengeziwe, abasebenzisi bangalandelela ukubekwa kwemali engenayo kusuka ku-imeyili ukuhlela amasu okuthumela esikhathini esizayo futhi bathumele kalula imiyalezo yenqola elahliwe ukuthola imali engenayo nokwandisa ukumaketha kwe-imeyili i-ROI.
Ukuhlanganiswa kwenqola yokuthenga ethile yomsebenzisi kugcwalisa izingxenye ezizenzakalelayo ngokususelwe ekuthengweni okuvela ezigabeni zepulatifomu noma izinhlobo zomkhiqizo.
IDelivra Commerce abasebenzisi bangakha futhi izingxenye zabo ezizosetshenziselwa ukuhlolwa okujwayelekile, ukwahlukanisa, kanye nokuthunyelwa kweposi. Izibonelo zezibonelo zifaka:
Ukusetshenziswa kwedatha yenqola elahliwe ukudala ifayela le- kubangele isaziso sokuposa
Ukusetshenziswa kwedatha yoku-oda ku thengisa neminye imikhiqizo
Ukusetshenziswa kwedatha yoku-oda ongayicela ukubuyekezwa komkhiqizo
Esinye isici esibalulekile ukukwazi ukudala "umcimbi ohlatshwe umkhosi" ngokususelwe ekuthengeni okuthunyelwe, okuvumela abasebenzisi ukuthi "basethe futhi bakhohlwe" imikhankaso ezenzakalelayo ngenkathi belawula isikhathi nomyalezo wokuxhumana okuhlobene nezentengiselwano. Imicimbi ehlatshwe umkhosi ivumela umakethi ukuthi ahlole inqubo, futhi enze igxathu lokuhamba komsebenzi libe izindlela ezimbili. Isibonelo, umakethi angakhetha ukuhlola ukuthi ngabe umamukeli uvule i-imeyili noma cha, uchofoze kusixhumanisi esithile, uthengwe esitolo se-e-commerce, njll. Imicimbi ehlatshwe umkhosi ibalulekile ngoba ivumela umthengisi ukuthi alawule okuzokwenziwa ngokulandelayo kumamukeli, ngokuya ngesenzo sangaphambilini somamukeli noma ukungenzi lutho. Umthengisi angakhetha ukuthumela ama-imeyili ahlukile, ukuvuselela izinkambu zedatha noma ukuthumela imiyalezo ye-SMS.
IDelivra Commerce kufaka phakathi ukuhlanganiswa ne I-Google Analytics Ecommerce. Isebenzisa idatha kusuka ku-Google Analytics, lokhu kuhlanganiswa kuvumela abasebenzisi ukuthi bafinyelele kumamethrikhi asemqoka njengemali engenayo, ukuthenga namanani wokuguqulwa, nokuthi ahlanganiswa kanjani ekuposelweni ngakunye ne-imeyili kukonke. Ngokungeziwe ekuhlanganisweni kweGoogle Analytics, amamethrikhi okuposa nawo abikwa kumafomethi anemininingwane yokubuka konke kwe-akhawunti, ukubuka konke kweposi, izibalo zokulandelela, izibalo zokulethwa kanye nokuqhathanisa okuposa.
Ukuqala ngokusebenza ngamandla kweDelivra Commerce kuyindlela esheshayo yabasebenzisi abasha nabakhona. Noma ngabe kuthuthukiswa noma kuqalwa i-akhawunti yekhasimende, iDelivra ingavumelanisa ipulatifomu nedatha yenqola yokuthenga yekhasimende cishe ehoreni elilodwa.
Tags: i-imeyili yenqola eshiyiwedelivraEzentengiselwano delivraimeyili ye-ecommerceimeyilii-google analytics ecommerceMagentoi-imeyili ye-magentothengathenga i-imeyilikubangele i-imeyiliWooCommercei-imeyili woocommerce